Imimiselo neemeko - 50% Win Ukunyusa game New Daily ukuya £ 50 |
Imimiselo neemeko – 50% Win Ukunyusa game New Daily ukuya £ 50
Le bonus kuya kuba esebenzayo phakathi 2 – 8th February 2017 IGMT.
Inzuzo kuphela Ilahleko (P&L) imidlalo slot ekhethiweyo, superman, The Batman, Justice League, kwaye I-Green Lantern phakathi 00:00 & 23:59 (IGMT) ngomhla we zokupasa ziya kubalwa njengemfuno ukwenzela Ukunyusa.
Ngokukhula iya kunikwa ngenxa yenzuzo (lokuwina imali yokwenene) kwi zokubeka ezikhethiweyo. Kwimeko yokuba umnatha P yakho&L liye lafumana ubuncinane € 10 lokuwina, uya kufumana inkxaso ebaliweyo 50% ye P yakho epheleleyo&L.
Ukuze ube nokulungela ukufumana Win Ukunyusa, Abadlali kufuneka zenziwe idipozithi ubuncinane € 10 ngomhla nasekukhuthazweni kubhejwa kwi Superman, The Batman, Justice League kwaye The Green Lantern.
Imali iyonke win zii € 50 imali yebhonasi.
iimfuno Standard bonus ubheja of 30x imali yebhonasi isicelo phambi iibhonasi okanye nayiphi lokuwina capped kungarhoxiswa.
Wagers kwi Blackjack and Blackjack musa negalelo ekunciphiseni imfuneko ubheja imali eyintsalela yebhonasi.
Abadlali bayakhunjuzwa ukuba ibhonasi enye kuphela kunokuba esebenzayo nangaliphi na ixesha, nceda yiya ku “i-akhawunti yam” kwicandelo ukujonga yonke yebhonasi kumgcelele yakho
ngokubanzi Imimmiselo nemiqathango isicelo.
Imimiselo neemeko – Tuesday Match – 50%…
Imimiselo neemeko – 50% Win Ukunyusa ukuya £ 100
20% Win Ukunyusa Daily Cleo Plus isihloko ukuya £ 200
Imimmiselo nemiqathango – Losses back week all…